Kirstie Alley anotaura runyerekupe rwekuti John Travolta ngochani - Nhau
Kuru Varaidzo Blog Nhau Style
Kirstie Alley anotaura runyerekupe rwekuti John Travolta ngochani
John Travolta akatarisana kwenguva refu runyerekupe rwekuti ngochani .
Asi sekureva kweshamwari yepedyo, aimbova co-nyeredzi uye waanoshanda naye Scientologist Kirstie Alley - uyo anoti iye nemutambi vakadanana makore apfuura uye vakaita zvekudanana - John haasi murume ngochani.
flip kana flop alyssa logan
Akabvunzwa kana aifunga kuti runyerekupe runogona kunge rwuri rwechokwadi, Kirstie 'nesimba' akadzungudza musoro wake, akazvinyima ndokuudza Zuva reDan Wootton mubvunzurudzo yakaburitswa munaGunyana 16, 'Kwete, ini handidaro. Ndiri kureva, ndinomuziva zvakanaka - uye ndinoziva rudo… '
Kirstie akatsanangura kuti iye naJohn, avo vakaita nyeredzi muna 1989 'Tarisa Ndiani Ari Kutaura' pamwe chete nemaviri akateedzana, vakawirana kare ikako asi vakati havana kupedza manzwiro avo nekuti aisada kubiridzira panguva iyoyo -murume Parker Stevenson, waakange akaroora muna 1983.
Dai iye naJohn vakaita sarudzo iyoyo, anotenda kuti zvingadai zvakashamisa pakutanga asi pakupedzisira zvaizoguma zvakashata. 'Ini naJohn tingadai takadyisana nekuti ini naJohn takafanana. Zvingaite senge nyeredzi mbiri dzinopisa dzakangobuda, 'Kirstie akadaro.
Chiitiko chose chakarwadza. John angabvuma kuti zvaive zvekudyidzana kuti isu takadanana. Ndichati ndechimwe chezvinhu zvakaomesesa zvandati ndamboita, chisarudzo chakaomesesa chandati ndamboita, nekuti ndaive ndakapenga murudo naye - taifara nekuseka pamwechete, 'akadaro.
david foster uye katherine mcphee
'Yakanga isiri hukama hwepabonde nekuti ini handisi kuzobiridzira murume wangu. Asi iwe unoziva, ini ndinofunga kune zvinhu zvakatonyanyisa kupfuura hukama hwepabonde, pane kubiridzira mumwe munhu nenzira iyoyo, 'akawedzera. 'Ini ndinofunga zvandakaita zvakatonyanya nekuti ndainyatsozvibvumira kudanana naye ndogara murudo naye kwenguva yakareba.'
Kirstie akatsanangurira Zuva kuti John akaenderera mberi paakaona kuti hapana chaizouya pane yavo yekudyidzana. 'Pazvakava pachena kuti ndakanga ndichigara ndakaroora, akatanga kuona Kelly [Preston] zvakare,' akadaro. John akaroora Kelly muna 1991.
Kirstie akati Kelly akambomunetsa nezvehunhu hwake kunaJohn mukutanga kwema90s. Kelly akauya kwandiri - uye vaive vakaroora panguva iyoyo - ndokuti, 'Erm, sei uchidanana nemurume wangu?' 'Kirstie anoyeuka. 'Uye iyo yaive mhando yandaifanira kuita sarudzo uye anga ari magumo ekupedzisira eizvozvo.'
Kirstie, John naKelly vava shamwari dzakanaka - ivo vese vanogara padhuze nepadhuze, Kirstie akagovana neZuva, achiwedzera kuti vane gedhi mufenzi mavo rinovatendera kuti vashanyirane zviri nyore.
ko jamie lee curtis akafa
Kirstie akati zvakare anotenda kuti iye naJohn vangadai vasina kugara sevanhu vaviri kwenguva refu dai vaizopa zvido zvavo makore ese apfuura.
Iye 'Pulp Fiction' mutambi 'anorara senge 4 kana 5 mangwanani uye anomuka kuma3 masikati. Ndinoenda kunorara nenguva dza9 manheru uye ndinomuka na5 mangwanani. Isu tingadai tisina kunge tamboonana. Ingadai iri njodzi, 'akawedzera.
'Uye zvakave zvakanaka nekuti isu takaramba tiri shamwari dzepedyo makore ese aya.'
Kathie Lee Gifford akavhurika kudanana zvakare
'Vanderpump Rules' nyeredzi yakaroora murume chakavanzika inoratidzwa
danny devito uye rhea pearlman
lisa marie presley achiri sainzi
akaita joe kubiridzira teresa
heidi klum nemhuri yake